Wararka Maanta: Khamiis, Apr 4 , 2013-Dowladda Kenya oo sheegtay inay Qayb ka mid ah Ciidamadeeda AMISOM ka tirsan ay kala baxayso Soomaaliya
Afhayeenka milateriga dalka Kenya, Cyrus Oguna ayaa sheegay in ciidamada loogu talogalay inay ka howgalaan Koonfurta Soomaaliya ay gaarayaan 4664 askri dhammaantoodna ay Kenya geystay, balse ay la baxayaan haddii ay soo gaaraan dalka Ciidamada Sierra Leone.
“Heshiiskii is-afgaradka ahaa ayaa wuxuu dhigayay in Kenya ay ciidamada looga baahan yahay Koonfurta Soomaaliya geyso, markii ay ciidamada ka socda Sierra Leone yimaadaanna ay kala baxdo tiro le’eg ciidamada la keeno,” ayuu yiri Col. Oguna.
Ciidamada ka socda dalka Sierra Leone ayaa la sheegay inay ka howgeli doonaan Koonfurta Soomaaliya ayna ka barbar shaqeyn doonaan kuwa ka socda dalka Kenya oo gacanta ku haya magaalada Kismaayo.
Qaybtii ugu horreysay ciidamada Sierra Leone ayaa soo gaaray Muqdisho shalay sida ay sheegeen saraakiisha AMISOM, kuwaasoo la sheegay in marka lasoo dhameystiro si toos ah loogu qaadi doono Koonfurta Soomaaliya si ay halkaas uga howgalaan.
Dhanka kale, Col. Oguna oo wax laga weydiiyay maamul u sameynta Jubbooyinka oo la sheegay inay gacanta kula jirto dowladda Kenya ayaa taas iska fogeeyay, wuxuuna sheegay in howshaas ay waddo IGAD ayna meel wanaagsan marayso.
“Ciidamada Kenya wax lug ah kuma lahan howshaas, waxayna Soomaaliya u joogaan howlo milateri ee mid siyaasadeed uma joogaan, balse waxaan kuu sheegayaa in howshaas ay wataan dadka deegaanka meel fiicanna ay u marayso,” ayuu yiri Col. Oguna.
Dalka Sierra Leone ayaa wuxuu noqonayaa dalkiii shanaad oo ciidamo qayb ka noqda AMISOM ku yabooha, iyadoo ay horay ugu yabooheen ciidammo dalalka, Uganda, Burundi, Jabuuti iyo Kenya.